Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण सर्वोच्चको फैसलाः ‘बाँधिएका सांसदहरू दाम्लो चुँडाएर अर्कोतिर’
१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०९:०६
पुस ५ गते मुलुकलाई अस्थिरताको बाटोबाट जोगाउन प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन भएसँगै मुलुक ताजा जनादेशमा अगाडी बढिसकेको थियो । सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित राख्न गरिएको उक्त कदमलाई फलामे तारले छेक्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्यो । जसले गर्दा अबका दिनमा मुलुकमा विकास र समृद्धिको यात्रालाई लक्षीत विन्दुमा पुर्याउने भन्दा पनि कुर्सीको लडाईको लागि देशी विदेशी तत्वहरुको इसारामा वा दलालीको चक्रव्युमा लगभग प्रायः निश्चित जस्तै भएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ भने अगाडि लानेछ । नेताहरु प्रधानमन्त्री हुनु मात्रै होइन, मन्त्री हुन पनि दौडादौड गर्ने छन् । यता बाँधिएका सांसदहरू दाम्लो चुँडाएर अर्कोतिर भाग्न सक्दछन् । उता बाँधिएका सांसदहरूको पनि दाम्लो चुडाउने प्रवृति रोकिने छैन ।
यसले घरेलु राजनीतिलाई मात्रै होइन, वैदेशिक चलखेललाई पनि बढावा दिनेछ । यस्तो चलखेलका लागि वैदेशिक शक्तिलाई खुलारूपमा स्वागत गर्ने प्रयास हुनेछ । हुनत नेपालमा अस्थिरता पैदा गरी आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न जुनसुकै कदम चाल्न पछि नपर्ने छिमेकी मुलुक भारतको इसारामा चलेका केही नेताहरुको व्यवहारले गर्दा मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डतालगातका कुराहरुमा समेत गंभिर असर पर्ने देखिएको छ । भारतको इसारामा चल्ने नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरुको हातमा नेतृत्व जानु नै मुलुकमा अस्थिरताको भूमरिमा पर्नु हो । यो आम नेपाली जनताले प्रष्ट रुपमा बुझेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गुमेको नेपाली भुभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको हो भनि राजनीतिक तथा प्रशासनीक नक्सा जारी गर्नु नै सरकार ढाल्ने खेल शुरु भएका थिए । त्यती मात्र नभई प्रचण्ड नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीसहितको नक्साको विरोधी रहेको प्रष्ट रहेको छ । उदाहरणको लागि प्रचण्डको घरमा रहेको नेपालको नक्सा हेरे प्रष्ट हुन्छ । प्रचण्डले प्रयोग गर्ने वा राखेको नेपालको नयाँ नक्सा नभई पुराने नक्सा नै हालसम्म प्रयोग गरिरहनुभएको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने प्रचण्ड नेपालको पक्षधर नभई भारतीय पक्षधर हो भन्न सकिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको सवालमा पनि प्रचण्ड, बाबुराम झलनाथलगातका नेताहरुको दौड नेपाल र नेपाली जनताको लागि नभई भारत परस्त भएको पाइएको छ । उपचारको बहानामा भारतीय एजेण्डालाई सफल बनाउन अहोरात्र खटिएको देखियो । जसमा सर्वोच्चले हात थापिदियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा नेपालकै अस्पताल तथा डाक्टरहरु योग्य हुने तर प्रचण्ड, माधव, झलनाथ, बाबुरामकै उपचार गर्न चाही अयोग्य हुने ? यस्तो कुरा आम नेपाली जनताले प्रष्ट बुझेका छन् कि उपचारको बहानामा भारतीय एजेण्डा सफल बनाउन नेपाली नेता भारतीय बास भएको हो ।
केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गरियो भनेर सडकमा उफ्रिँदा उहाँका विरोधीहरूलाई क्षणिक तुष्टि र आनन्द त मिल्ला, तर राजनीति सम्भावनाहरूको खेल हो । यसले फेरि पनि केपी शर्मा ओलीलाई नै राजनीतिको मियो र हिरो बनाउने छ ।
यो अस्थिरताको खेल देखेर नेपाली जनता निकट भविष्यमै प्रधानमन्त्रीले पुस ५ मा ताजा जनादेश लिन गरेको निर्णय ठीक थियो भन्ने अवस्थामा पुग्ने छन् । त्यतिबेला पनि केपी शर्मा ओली नै राजनीतिको मियो बन्नु हुनेछ ।
केन्द्रीय सदस्य, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल